HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Nilaza i Ankaragans fa tokony hiova ny seza eo amin'ny sarety
08 / 01 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, Railway, ANKAPOBENY, Light Rail System (HRS), KENTİÇİ Rail Systems, Headline, TORKIA, VIDEO
Ny sarety Ankaray eto an-drenivohitra dia nilaza fa niova ny seza
Ny Kaominina Metropolitan Ankara dia hanova ny fandaharana seza ho an'ireo sarety ao Ankaray, ny rafi-pitaterana maivana izay miasa eo anelanelan'i Dikimevi sy AŞTİ. Ny sarety Ankaray hijanona ao amin'ny seza roa efa misy na ny rafitra seza seza vaovao hanodinana ilay fanadihadiana roa voafantina 70.4 isan-jaton'ny fanapahan-kevitra ny 'fiovana'
Araka ny valin'ny fanadihadiana, talohan'ny nisian'ny seza teo amin'ny sarety dia nosoloana fehezin-dàlana, ny antsasaky ny sarety fiaran-dalamby A13 dia noforonina ho an'ny mpandeha ary ny fifanarahana antsasa-manila vaovao.
FIVORIANA VAROTRA WAGON SEAT CHANGE
70.4 isan-jaton'ny biraom-pifidianana nokarakarain'ny Kaominaly hanova ny baikon'ny seza dia 'fanovana' no fanapaha-kevitra ny hiova. 29.6 isan-jaton'ny valin-tenin'ireo te hamaly no te hijanona ao amin'ny fandaharana seza ankehitriny. Raha ny valin'ny fanadihadiana dia havanana ny seza ao Ankaray Hanomboka manompo ao anatin'ny 20 andro ny sarety voalohany. Ny sarety rehetra dia alefa amin'ny laharana seza vaovao ao anatin'ny 6 volana. Ny monisipaly dia handamina ireo seza vaovao miaraka amin'ny fomba ananany manokana ary amin'ireo mpiasa ao aminy. Homena ny fitsangantsanganana ny seaka eny amin'ny sarety rehefa niova izy ireo.
TOROHEVITRA FARANY VAOVAO
Nanantitrantitra ny tompon'andraikitra ao amin'ny EGO fa ny fizarana seza dia haneho fizarana homamiadana amin'ny haben'ny mpandeha, izay hahazo tombony maro ary hanome izao fampahalalana manaraka izao:
"Noho ny fandaharana seza làlana vaovao, dia mitombo ny 240 ka hatramin'ny 270. Ho malalaka kokoa ny ao anaty sarety. Indrindra fa hohalavirina ny fampivondronana ireo faritra eo am-baravarana. Mora kokoa ho an'ireo mpandeha nandeha an-tongotra na avy any AŞTİ na hiditra na handeha amin'ny lamasinina. Ireo mpandeha mandeha miaraka amin'ny valizy ihany koa dia hanana ny fametrahana ny valizy ho an'ireo faritra eo amin'ny sisin'ny vavahady. Vokatry ny fanitarana eo amin'ny zana-baravarana, ny mpandeha sembana (indrindra ireo mandeha amin'ny seza misy kodiarana) dia ho afa-mihetsika mora kokoa mandritra ny fitsangatsanganana sy ny sambo.
Ankaray manana fiatoana 11 ary manompo mpandeha mihoatra ny 100 XNUMX isan'andro isan'andro eo anelanelan'ny fiara fitateram-baravarankely eo akaikin'ny Dikimevi sy Ankara. Ny rafi-pitaterana maivana voalohany ao Ankara, Ankaray, dia rafitra fitaterana lehibe tian'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ary koa ireo mpandeha tonga na mandeha bus intercity eto an-drenivohitra.
Seza seza ankaray Ahoana ny hevitrao?
Ny kapitalista dia maniry ny hanaparitaka ny metrobinson
9 an'arivony Lira ho an'ny fitateram-bahoaka
Olona an-tapitrisany feno fahafaham-po amin'ny Metro Transports
Capital City 15 Jolay Trains
Eymir Expeditions afa-po
Fanamarihana momba ny fanangonana: 100 dia nividy fampindram-bola ho an'ny seza
Toeram-piasan'ny Automotive Hüroğlu
Fanamarihana momba ny fividianana: Fikirakirana ny tranom-bolo tokana ho an'ny mpandeha an-tariby ho an'ny National Train Set (TÜVASAŞ)
Tram Seats Scatter ao Samsun
Ny mpiasan'ny 43 dia hividy hanadio ny fiara Ankaray
ANKARAY Mipetraka amin'ny sariety
Tapak-tsarety VIP amin'ny fiarabe haingam-pandeha ambony